Difaaca Xisaabtanka Bulshada Difaaca - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Maareynta Kobaca|Mawduucyada Maareynta Kobaca|Xisaabta Difaaca Bulshada
Xisaabta Difaaca Bulshada
Kalfadhigii sharci dejinta ee gobolka Washington ee 2019 wuxuu abuuray Xisaab Bulsho Difaac leh Beddel Golaha Guurtida Bill 5748 si loo taageero kaabayaasha lagama maarmaanka ah loona taageero ka faa'iideysiga dhulka iyo kaabayaasha ku dhow agabka militariga Washington.
Ujeeddada barnaamijku waa in la helo qaab-dhismeedkii ugu horreeyay ee gobolka oo dhan lagu qiimeeyo laguna kala hormariyo mashaariicda kor u qaadaya dhaqaalaha, deegaanka iyo tayada fursadaha nolosha ee bulshada maxalliga ah ee ay saameeyeen joogitaanka goobaha milatariga.
Xisaabaadka Is-waafajinta Bulshada Difaaca (DCCA) waxaa loogu talagalay in lagu jiido mashaariicda badan ee isticmaalka shacabka iyo millatariga iyadoo loo marayo habka qiimeynta dhexe si loogu soo bandhigo Sharci dejinta liistada hubinta, mashaariicda u-qalma ee diyaar u ah inay wax ka qabtaan arrimaha is-waafajinta ee gobolka oo dhan. Horumarinta barnaamijkan, Washington waxay ku biireysaa 19 gobol oo kale oo bixiya fursado maaliyadeed si kor loogu qaado is waafajinta u dhexeysa millatariga iyo bulshada ay martida u yihiin.
DCCA waxay kobcineysaa iswaafaqsiga isticmaalka dhulka ee udhaxeeya bulshada iyo rakibaadda milateriga iyadoo siineysa qaab isdaba-joog ah iyo barnaamij barnaamij ah oo ku saabsan weydiisashada iyo qiimeynta mashaariicda iswaafajinta rayidka iyo militariga. Codsi weydiinta iyo qiimeynta waxay gacan ka geysaneysaa aqoonsiga iyo kala-mudnaanta baahiyaha ka imanaya bulshooyin fara badan oo ay saameeyeen dhaqdhaqaaqyada milateri. Waxay fududeeysaa isku-duwidda u dhexeeya taliyeyaasha rakibaadda milateriga iyo qorsheeyeyaasha dowladda hoose iyadoo la siinayo hanaan maaliyadeed oo loogu talagalay hirgelinta xalka ku habboon isticmaalka dhulka.
Codsiga mashruuca 2019
Sebtembar iyo Oktoobar 2019 ayaa calaamadeeyay daaqada barnaamijka ee bilowga ah, iyagoo si rasmi ah u codsanaya codsiyada mashaariicda dhiirrigeliya horumarka la jaanqaadi kara ee ku dhow agabka militariga ee Washington. Liiska mashaariicda waxaa loo gudbiyay Sharci dejinta qaab ah Warbixinta Sharci dejinta ee 2019 DCCA bishii Janaayo, 2020.
Mashaariic kaladuwan oo laxiriira iswaafajinta ayaa uqalma barnaamijka, oo ay kujiraan liistada soo socota ee howlaha mashruuca halkii SSB 5748.
Mashruucyada si wada jir ah uga caawinaya soo kabashada ama ilaalinta noocyada halista ah ee ku tiirsan hantida rakibidda millatariga ee deegaanka.
Mashaariic ama barnaamijyo lagu kordhinayo helitaanka guryo la awoodi karo oo lagu qoro shaqaalaha militariga iyo dadka aan u baahnayn ee bulshada deegaanka ah.
Mashaariicda dib loogu hagaajinayo adeegsiga jira si loo kordhiyo iswaafajinta hawlgallada militari ee jira ama mustaqbalka ah.
Mashruucyada ka caawiya bulshada inay bedelaan shaqooyinka lumay haddii ay yaraato joogitaanka ciidanka.
Mashaariicda hagaajineysa ama xoojineysa dhinacyada dhaqaalaha maxalliga ah, deegaanka, ama tayada nolosha ee saameynta ku leh joogitaanka howlaha militariga.
Liiska mashruuca 2019/2020 mudnaanta la siiyay:
Wadar ahaan toddobo mashruuc ayaa la helay intii lagu jiray daaqada dalabka. Mashaariicda waxaa lagu qiimeeyay iyadoo la adeegsanayo shax dhibco iyo geedi socod mudnaan si waafaqsan shuruudaha iyo talooyinka lagu qeexay sharciga ogolaanshaha. Go'aaminta maalgelinta waxaa iska leh Sharci dejinta.
1 Iskaashiga Bulshooyinka Milatariga ee South Sound Housing
2 Iskaashiga Bulshooyinka Milatariga ee South Sound Dhul la wareegis
3 Lakewood Water District Tayada Biyaha / Caafimaadka Bulshada
4 Iskaashiga Bulshooyinka Milatariga ee South Sound Gaadiidka
5 Magaalada Lakewood Gaadiidka
6 Xarunta Maareynta Dhulka Dabiiciga ah Noocyada soo kabashada
7 Xarunta Maareynta Dhulka Dabiiciga ah Ilaalinta / Masuulka
Wajiga 1: Ogosto 2019
Isuduwaha barnaamijka socda ee bilowga ah
Wejiga 1: Sebtember 3 - Nofeembar 1, 2019
Daaqada dalabka hore
Mudada su’aal iyo jawaab
Wajiga 1: Nofeembar 1 - Janaayo 1, 2020
Qiimee oo darajooyinka mashaariicda
U soo gudbi warbixinta bilowga sanadlaha ah iyo liiska mashruuca Sharci dejinta ugu dambeyn Janaayo 1, 2020
Wajiga 2: 2020
Foomka guddiga la-talinta
Samee sharci sameynta
Horumarinta iyo dib u eegista shuruudaha darajaynta
Solicit waxay ku baaqeysaa mashaariic
Wejiga 2: 2021 - Janaayo 1, 2022
Soo gudbi warbixin sanadle ah iyo liistada mashruuca sharci dejinta ugu dambeyn Jan 1, 2022.
Sababtoo ah lixda bilood ee cidhiidhiga ah ka hor waqtiga kama dambaysta ah ee warbixinta ugu horreysa ee ay u baahan tahay SSB 5748 iyo in la buuxiyo shuruudaha ka soo baxa bilowga sannadlaha ah ee ugu horreeya Jan.1, 2020, Ganacsigu wuxuu hirgeliyey DCCA iyadoo la adeegsanayo qaab waji leh. Wejiga koowaad waxaa ka mid ahaa horumarinta barnaamijka, oo ay ku jiraan agabyada fidinta, ka qayb qaadashada daneeyayaasha, wicitaankii ugu horreeyay ee mashaariicda, iyo qiimeynta gudbinta dalabyada.
Laga bilaabo sanadka 2020, wajiga labaad waxaa ku jiri doona barnaamij balaaran oo balaaran, iskudubbarid mashruuc iyo qorsheyn dheeri ah, sameynta shuruudaha ujeedoyinka joogtada ah ee ujeedada joogtada ah, iyo sii wanaajinta howlaha hada socda ee fariimaha, wacyigalinta iyo kaqeybgalka, oo ay kujirto fursada dhageysiga dadweynaha. Xukunka ayaa loo samayn karaa si loogu cusbooneysiiyo Xeerka Maamulka Washington iyadoo la caddaynayo macluumaadka lagu taageerayo hirgelinta. Hirgelinta dhammaan shuruudaha qaanuuneed waxay ku baaqeysaa shaqo barnaamij dheeri ah oo udhaxeysa warbixinnada labadii sanoba mar, oo ay kujirto gaarsiinta xarumaha militariga ee gobolka, dowladaha hoose, iyo hay'adaha kale ee uqalma wareegyada deeqaha mustaqbalka. Ganacsigu wuxuu sameyn doonaa guddi latalin muwaadin ah oo ka kooban daneeyayaasha bulshada si loo sameeyo shuruudaha ujeedada ee qiimeynta iyo qiimeynta codsiyada mashruuca mustaqbalka. Intaa waxaa sii dheer, xubin ka mid ah shaqaalaha barnaamijka ayaa u hibeyn doona waqti si looga caawiyo codsadayaasha horumarinta mashruuca si loo hubiyo in mashaariicdu ay diyaar u yihiin in la sii wado, la dhiso xiriiro lala yeesho bulshooyinka difaaca, iyo in laga caawiyo howlaha iswaafajinta isticmaalka dhulka ee socda ee heer maxalli ah Wejiga labaad wuxuu fuliyaa dhammaan qodobbada sharciga ee ku qoran SSB 5748 wuxuuna u noqon doonaa aasaaska heerarka barnaamijka ee horay u socda. Fursadaha codsiyada mashruuca waxay dhici doonaan sanadkiiba mar. Ganacsigu wuxuu u soo gudbin doonaa warbixinta labaad ee sharci dejinta sharci dejinta ugu dambeyn Jan 1, 2022
Ganacsigu wuxuu aqoonsan yahay muhiimadda bulshada iyo daneeyeyaasha wax ku biirintooda ku aaddan codsashada iyo hirgelinta mashruuca. Wacyigelinta socota waxaa lala sameyn doonaa wakiilo kala duwan oo ka socda hay'adaha federaalka, waaxda difaaca ee waaxda Mareykanka ee Washington, qabaa'ilka Hindida ee dowladda federaalku aqoonsan tahay ee ku nool gobolka, magaalada, gobolka iyo dawladaha gobolka, ururada, u doodista iyo ururada aan macaash doonka ahayn, saraakiisha la soo doortay, xaafadaha ururada, hay'adaha horumarinta bulshada, iyo dhinacyada kale ee daneeya. Fursada hawlgelinta waxaa lagu dhawaaqi doonaa inta lagu jiro jadwalka fidinta barnaamijka.
DCCA 2019 Warbixinta Sharci dejinta
Tilmaamaha Barnaamijka DCCA
Su'aalaha iyo Jawaabaha DCCA illaa Sebtember 16, 2019
Su'aalaha iyo Jawaabaha DCCA illaa Sebtember 27, 2019
Click button badhan si aad u bedesho qoraalkan. Halkaan waxaad ka arki kartaa amet, qadarin adigoo isticmaalaya elit. Waxaad u sheegi kartaa, matxafka necebyahay, pulvinar dapibus leo.
Maamulaha Barnaamijka, DCCA